Faro-weyne: Dugsi Tabaruc Loogu Dhisay Deegaan Ka Aradan Raadadka Dawladnimada | Somaliland Today
← Wasiiro Safar Shaqo Ku Jooga Magaaladda Laascaanood Oo Kormeeray Laamaha Dawladda Ee Gobolkaas
DAAWO: Sheekh Aaden Siiro Oo Deeq Lacageed Qoys 3 Carruur Ah Ku Waayay Dab Gurigooda Ka Kacay →
Faro-weyne: Dugsi Tabaruc Loogu Dhisay Deegaan Ka Aradan Raadadka Dawladnimada
(SLT-Dacawaley) – Waxa laga Furay maanta Deegaanka Dacawaley Dugsi Cusub oo ay dhiseen Qurba-jooga Deegaankaasi ee dibaduhu.
Xaflada loo sameeyay furitaanka Dugsigan ayaa waxa ka qayb galay Madaxda Dowlada oo kala ah Gudooomiyaha Waxbarashada , Agaasime Waxeedka Dugsiyada Wasaarada Waxbarashada , Salaadiin , Siyaasiyiin , Ganacsato , Qurbajoog iyo Ururka Hormarinta DHalinyarada Ee Curad Youth .
Ibraahim Maxamuud Obsiiye oo ahaa masuulkii gacanta ku hayey dhismaha intii uu socday waxaanu ka sheekeeyay, sababihii dhaliyay dhismaha Dugsigan oo uu isagu hormuud ka ahaa markii dalka ku soo laabtay sanadkii 2010 oo uu arkay baahiyaha dhanka waxbarasho ee deegaanka ka jira.
“dhismaha schoolkan maanta aad iyo aad baan ugu fasaxsanahay maadaamo riyadii inaan school u dhisno deeganka ay ii rumooday waxaan u mahadnaqayaa wasaarada waxbarashada, dadkii ka qayb qaatay dhismaha Dugsigan iyo dhamaan marti sharafta ka soo qaybgashay furitaankiisa, waxaanan u bixinaynaa dugsigan Curad School” ayuu yidhi Mr.Ibraahim Obsiiye.
Ismaciil Cabdilaahi Cali oo ka tirsan Guddida Diwaan-galinta Ururada Siyaasada Somaliland ayaa isaguna halkaasi ka soo jeediyey kalmada qiimo badan oo ku aadan waxbarashada iyo faa’idada ay u leedahay bino aadamka.
Ismaaciil ayaa sidoo kale u diray hamabalyo gurba-jooga deeganka dacwaley horumarka fiican ee ay sameeyeen, waxaanu kula dardaarmay bulshada deegaanka inay ka faaidaysaan deegaanku dugsiga cusub ee loo dhisay.
Gudoomiye Ku-xigeenka Ururka Curad Yoonis Axmed Yoonis, kaasoo isna dhankiisa u mahad naqay cid kasta oo ka qayb qaadatay Dhismaha Dugsigan.
Mareeyaha Xafiiska Xidhiidkha Mucaawimooyinka WFP ee Xukuumadda Somaliland Md. Yuusuf Cismaan Garas oo xaflada ka hadlay, ayaa ammaan iyo bogaadin u jeediyay dadka ku tabarucay Mashruucan waxbarasho ee la furay, waxaanu Wasaaradda Waxbarashada u soo jeediyay inay balaadhiyaan Dugsigan si waxbarashada deegaanka loo kobciyo.
Yuusuf Garas ayaa balan-qaaday inuu bixin doono qaybta Silliga oo ka dhiman Dhismaha Dugsiga.Gudoomiyaha Qurbajooga Beesha Deegaankan degta ee Toljecle Mudane .Caydaruus Maxamuud Yuusuf oo ku hadalayey afka Qurbajooga, ayaa isna dhankiisa u mahadceliyey dhamaan qurbajoogii ka qaybqaatay dhismaha dugsigan, waxaanu sheegay inaanay noqon doonin waxqabadkii ugu horeeyey ee ay ka qayb qaadan doonaan horumarint wax kasta oo ka dhiman baahiyaha aasaasiga ah ee deegaanka.
Oday Yaasiin Xaaji Muuse oo ku hadalayey Afka Odayaasha Deegaanka ayaa aad iyo aad ugu mahadceliyey qurbajooga deegaanka dacawley ee dugsiga u soo dhisay caruurtooda, sheegayna inay dowlada ka sugayaan waxyaabo badan oo deegaanka ka dhiman, inay macaliiminta Dugsiga u kordhiyaan , goob caafimaad inay deegaankani u sameeyaan iyo inay sanduuq diiwaangalinta la keeno deegaankani dacawley oo in badan sugayey in sanduuq la soo dhigo .
Gudoomiyaha Degmada Farawayne Faysal Maxamed Jamac ( Faysal Dheer) oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay inuu deegaanku ku jiro deegaamada hoose yimaad Degmada Farwayne Deegaanka ugu balaadhana uu yahay, dugsigan cusubina uu yahay kii 24-aad ee Degmada laga furo, isagoo waalidiintana ugu baaqay unay ubadka uga faa’ideeyaan.
Wuxuu sheegay inuu qorsha 2015 uu ku daray deegaankani in waxa laga qabto hadii ay tahay Xarun Caafimaad oo loo dhiso iyo dhamaan baahiyaha deegaanka ka jira sidoo kalena waxa uu sheegay inay keenayaa Degmada Dacawley Sanduuq Diwaangalinta.
Gudoomiyah Waxbarashada Ee Gobolka Maroodijeex Mudane. Xuseen Ibraahim Xasan ayaa ugu horay u mahadceliyey qurbajooga Dhistay Schoolkani Cusub kaasi oo balanqaaday inay kordhin doonaa sidoo kale ilaahay ka baryey inuu dusgiga oo ilaa 8aad leh la arki doono, waxaanu kula dardaarmay macalimiinta schoolka inay ardaydaasi yar yar waxbarashada sida ugu wanaagsan ugu dhigaan.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale agab deeq waxabarasho ku wareejiyey deegaanka oo ay ka mid ahaayeen Kubado , Buugaag , Mastarado , iyo agabkale oo ka kooban qalabka waxbarashada kaasi oo uu sheegay inay la garabtaagan yihiin wax kasta oo dugsigu u baahdo.
Suldaan Axmed Daahir Muuse iyo xubno kale oo ka hadlay xafladan ayaa soo dhaweeyay Dugsigan cusub ee laga hir-geliyay deegaanka Dacawaley.
Deegaanka Dacawaley ayaa ka mid ah Deegaamada hoos yimaada degmada Faro-weyne ee ay ka jiraan baahiyaha adeegyada bulshada ee kala duwan.